Ogaden News Agency (ONA) – Qaybaha Hanqadh Iyo Duufaan oo Kulan Muhiim Ah Galay.
Qaybaha Hanqadh Iyo Duufaan oo Kulan Muhiim Ah Galay.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia ayaa faahfaahin kabixinaya kulan muhiim ah oo dhex maray labo qaybood oo kamid ah ciidanka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia, warkan oo aan kahelay xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegaya in kulanku uu udhacay sidii loogu tala galay.
Kulankan oo dhex maray qaybaha Hanqadh iyo Duufaan ee ciidanka wadaniga xoraynta Ogadenia ayaa qabsoomay 22-23/7/17 waxaana kulanka kasoo qayb galay saraakiil sarsare oo kamid ah hogaaminta ciidanka qalabka sida ee xoraynta Ogadenia.
Kulankan oo muhiimadiisu ay ahayd iskaashi iyo kala warqaadasho ayaa lagu dajiyay qorshayaal cusub oo kamid ah tabaha cadawga lagula dagaalamo, waxaana kulanka la isku waydaarsaday xogo muhiim ah.
Kulanka dhexmaray labada qaybood ee Hanqadh iyo Duufaan ayaa lafilayaa in uu dar dar galin doono howlgalada ciidan ee kajira dhulka ay qaybuhu kahowl galaan, sidoo kale waxaa kulanka kasoo baxay istaraatiijiyad balaadhan.
Guntii iyo gunaanadkii taliye yaasha qaybaha Hanqadh iyo Duufaan ayaa baaq udiray kuwa gumaysiga u adeega, waxayna kula taliyeen in ay shacabka gumaadka kadhaafaan.